Dane-Elec Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Dane-Elec Kaydinta De
> Resource > Ladnaansho > Dane-Elec Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Dane-Elec Storage Devices
Ma u suurto Me inuu ka soo kabsado Xogta laga USB Dane-Elec Flash Drive?
Waxaan si qalad ah formatted aan 8GB Dane-Elec USB flash drive, oo 4 sano ka qiimo macluumaadka sida sawirada iyo waraaqaha. Waxaas oo dhan walax aan ku USB wixii afkayaga. Maxaan samayn karaa dib si aad u hesho files ii? Waxaan u maleynayaa in ay doonin weligiis tageen. Qof ii sheegi kartaa sida? Mahad badan.
Your malo waa xaq. Photos iyo waraaqaha ayaa weli aad Dane-Elec USB flash drive. Waxaa kaliya loo tixgeliyaa sida xogta geli sugayaan in la overwritten by xog cusub. Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa in aad joojiso qaadashada Dane-Elec flash USB drive hadii aad rabto in aad dib u hesho xogta aad. Markaas waxaad u baahan doontaa si aad u hesho Dane-Elec qalab kabashada xogta caawimaad ah.
Halkan waxaan jeclaan lahaa inaan ku talinaynaa Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac idiin, utility ah kaas oo awood kuu inuu ka soo kabsado xogta ka dhammaan noocyada kala duwan ee qalabka lagu kaydiyo Dane-Elec, oo ay ku jiraan kaadhka xusuusta flash, drive dibadda adag oo USB flash drive. Muuqaalada ay awood badan kaa caawin kara inaad soo kabsado aad files lumay sida sawirada, videos, waraaqaha, files audio, files archive iyo in ka badan.
Waxaad kala soo bixi kartaa version tijaabo ah oo ka mid ah aalad si ay u soo kabsadaan xogta ka Dane-Elec card flash xasuusta, USB flash drive iyo drive dibadda adag hadda!
Qabtaan Dane-Elec Data Recovery in 3 Talaabooyinka
Hadda aynu isku dayaan in ay soo kabsadaan xogta ka Dane-Elec drive adag dibadda, kaadhka xusuusta flash ama USB flash drive iyadoo la kaashanayo Wondershare Data Recovery for Windows. Haddii aad qabto Mac ah, waxaad ka shaqayn kartaa dib u soo kabashada ee talaabooyin la mid ah la version Mac.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada inuu ku soo bilowdo Dane-Elec kabashada xog ah
Marka socda barnaamijka on your computer, waxaad heli doontaa interface ah soo socda. Halkan waxa aad u baahan tahay in ay doortaan hab kabashada ah si ay u bilaabaan.
Waxaad qaadan kartaa "lumay Recovery File" mode sida isku day ugu horeysay inuu ka soo kabsado xogta ka Dane-Elec flash USB drive.
Fiiro gaar ah: Fadlan hubi in aad qalab lagu kaydiyo Dane-Elec in si wanaagsan loo-xiran kartaa adiga oo computer la sameeyo.
Tallaabada 2 baarista Dane-Elec USB flash drive
In talaabo fudud, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan aad Dane-Elec flash USB drive oo guji "Start" furmo si ay u bilaabaan baar files waxa on.
Si aad u soo kabsado xogta laga qalab formatted Dane-Elec, waxa kale oo aad dooran kartaa "Enable Deep Scan" feature uu furmo.
Tallaabada 3 Ladnaansho xogta ka Dane-Elec USB flash drive
Hadda dhammaan faylasha helo waa la soo bandhigi doonaa suuqa kala dib markii iskaanka. Oo waa inaad u baahan tahay oo kaliya si ay u xusaan files aad u baahan tahay si ay u soo ceshano oo guji "Ladnaansho" si ay u hanato si aad u computer.
Fiiro gaar ah: Si looga fogaado xogta overwritten, fadlan ha ka dib si aad u qalab lagu kaydiyo Dane-Elec badbaadin xogta soo kabsaday.